Iindaba - Izizathu ezi-5 zokuba umthambo Wenza Wonwabe
Ukudinwa kokuziva uphantsi kwiindawo zokulahla? Shukuma! Ngaba uxinezelekile ngomsebenzi? Shukuma! Ngaba ukhathele kukuziva ubuthathaka kuyo yonke imini yakho? Nyusa! Ukudinwa ukuya kwizinyuko? Intloko yeenduli! Kuyamangalisa ukuba yintoni umthambo onokuyenza ebomini bakho bonke. Ayisiyonto yokufumana nje imeko engcono. Imalunga nokwenza ubomi bonwabe ngakumbi! Xa kulula ukuhamba, kulula ukwenza yonke into ofuna ukuyenza! Jonga uluhlu olungezantsi ukuze ubone ukuba ikhona into ehambelana nawe.
1. Imood ebhetele
Kwimizuzu nje emihlanu yomthambo wentliziyo, unokuziva wonwabile! Nje ukuba ushukume, ingqondo yakho ikhupha i-serotonin, i-dopamine kunye ne-norepinephrine kunye nezinye. Oku kukwenza uzive kamnandi! Ke, nokuba awufuni kwenza nto, ukuhamba nje kukwenza wonwabe ngakumbi!
2. Ukuncipha koxinzelelo
Ngokutsho kolunye uhlolisiso olwenziwa kwi-intanethi, kuphela ngabantu abali-14 ekhulwini abasebenzisa imithambo rhoqo ukuze bakwazi ukumelana noxinzelelo. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kuthatha imizuzu emihlanu ukuqala ukuziva ubhetele kwaye akufuneki ukuba ube ngumthambo onzima. Ngapha koko, umthambo ophantsi ukuya kumodareyitha wobungqongqo ungcono kunokuqina okuphezulu koxinzelelo. Kutshanje ndiye ndafunda inqaku kwiLizwe leMbaleki malunga nokuba umthambo uchaphazela njani uxinzelelo lwasemva koxinzelelo. Ukuhamba, ukubaleka kunye neyoga kuye kube kokhetho oluthandayo.
3. Ukomelela okungakumbi kwengqondo
Kwicala elinzima lengqekembe, xa usenza imithambo ngendlela ekutyhala ngokwasemzimbeni, uyomelela ngokwasengqondweni. Xa uqinile ngokwasengqondweni, unokujongana noxinzelelo ngakumbi. Abanye abantu, iimvakalelo zokuphucula ukomelela kwengqondo ziyakhobokisa. Ufikelela usukelo lwakho kwaye uqale ukuzibuza ukuba yintoni enye onokuyenza! Abantu bayaziqeqesha ukuze bathathe inxaxheba nakwezemidlalo njengokubaleka, ubugcisa bemfazwe, ukuhamba ngebhayisikile, njl. Unokuphatha ngaphezulu kwayo nayiphi na into.
4. Ubomi Buziva Bulula
Ukuba ubunokulufumana usuku lwakho ngendlela elula ngokwasemzimbeni, ngaba ngekhe kulunge? Ukuba ukubamba ukutya kunye nabantwana, okanye ukuhambisa izinto endlwini bekuya kuba lula, awungekhe wonwabe? Ukuzilolonga kungakwenza oko kuwe! Yandisa amandla, phucula impilo yakho yokomelela komzimba kunye nobomi uziva ulula! Masingathethi nangekhephu lomhlakulo.
5. Ukuphuculwa kwamajoni omzimba
Kukho iingcamango ezininzi malunga nendlela ukuzivocavoca ukuphucula ngayo ukukhusela kwakho. Ukuzivocavoca kunokunceda ngokukhupha iibhaktheriya emiphungeni kwaye kunokukhupha i-carcinogens ngokwandisa umsebenzi we-lymphatic system yakho, ekhupha inkunkuma emzimbeni wakho.
Xa igazi lakho lipompa, ukonyusa izinga apho ii-antibodies kunye neeseli ezimhlophe zegazi zibaleka emzimbeni. Bafumanisa kwaye bahlasele ukugula. Kutheni le nto ungafuni ukuba kwenzeke ngaphakathi kwakho?
Xa usenza umthambo, ukukhutshwa kwehomoni ezinxulumene noxinzelelo kuyacothiswa. Uxinzelelo ayisiyomvakalelo nje-yinto yomzimba. Ngokunciphisa loo mahomoni, uyayiphucula impilo yakho.
Kunokubakho into eninzi kakhulu nangona. Ukuzilolonga ngokuzolileyo kancinci kuyayiphucula inkqubo yomzimba yokuzikhusela. Ukuzivocavoca okunzima, okunamandla kunciphisa amajoni omzimba kwaye kwandisa ezo hormone zoxinzelelo. Ukuba ulwa nengqele, ukwenza imithambo elula njengokuhamba okanye ukugidima ixesha elifutshane ngumbono olungileyo. Ukuba uqeqeshelwa umdyarho kwaye ugqibe ugqatso olude okanye iseshini yomsebenzi wesantya kufuneka ulumke ungabambeki nabantu abagulayo iiyure ezininzi emva koko. Sebenzisa elo xesha ukuzinika isondlo esifanelekileyo emva kokusebenza kunye nokuphumla.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho wePuzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Zonke iiMveliso